LUK 6 - Baịbụl Nsọ [Igbo Bible 1988] - (LUK 6)
Nꞌụbọchị Satọde, nke bụ ụbọchị izuike ndị Juu, Jisọs na ndị na-eso ụzọ ya sitere nꞌubi a kụrụ ọka gafee. Mgbe ha na-agafe, ndị na-eso Jisọs ghọọrọ ụfọdụ ọka taa.
Ma mgbe ha na-eme nke a, ụfọdụ ndị Farisii hụrụ ha, tie mkpu sị, “Gịnị mere unu ji na-emebi iwu? Gịnị mere unu ji na-eme ihe megidere iwu nꞌụbọchị izuike?”
Jisọs zara ha sị, “Ọ̀ bụ na unu agụtaghị ihe akwụkwọ nsọ kwuru na Devidi mere mgbe agụụ gụrụ ya na ndị so ya?
Ọ banyere nꞌụlọ nsọ ukwu Chineke were beredi e nyere Chineke dị ka onyinye taa, nyekwa ndị so ya ka ha taa. Ma ọ dịghị onye ọzọ kwesịrị iri achịcha ahụ karịakwa ndị nchụaja.”
Mgbe ahụ Jisọs gwakwara ha okwu sị ha, “Ọ bụ Nwa nke mmadụ ka ọ dịrị ikpebi ihe e kwesịrị ime nꞌụbọchị izuike nꞌihi na ọ bụ ya bụ Onyenwe ụbọchị izuike!”
Ndị Farisii na ndị ozizi iwu nọ na-ele Jisọs anya ịhụ ihe ọ ga-eme. Ha chọrọ ịmata ma ọ ga-agwọ nwoke ahụ nꞌụbọchị izuike ka ha site na ya nweta ebubo ha ga-ebo ya.
Mgbe ahụ Jisọs gwara ndị nọ nꞌebe ahụ okwu sị, “Achọrọ m ịjụ unu otu ajụjụ: o ziri ezi ime ihe ọma nꞌụbọchị izuike ka iwu ọ sị anyị mee ihe ọjọọ nꞌụbọchị izuike? O ziri ezi ịzọpụta mmadụ nꞌụbọchị izuike ka ọ ka mma ịla ndụ mmadụ nꞌiyi nꞌụbọchị ahụ?”
Mgbe chi bọrọ, ọ kpọrọ ndị nile na-eso ụzọ ya, site nꞌime ha họrọ mmadụ iri na abụọ ndị ọ kpọrọ ndị ozi ya.
Ndị a bụ aha ndị ọ họpụtara, Saimọn, (onye ọ gụgharịrị Pita) na Anduru nwanne ya, Jemes na Jọn, Filip na Batalomiu.
Matiu na Tọmọs, Jemes nwa Alfiọs na Saimọn onye so nꞌotu ndị Juu chọrọ iji ike kwatuo ọchịchị ndị Rom.
Emesịa, Jisọs na ndị ozi iri na abụọ ahụ si nꞌugwu ahụ rịdata. Na ndịda ugwu ebe ha guzo, ọtụtụ ndị na-eso Jisọs gbara ha gburugburu, ha na ndị nile si Judia, Jerusalem, na obodo Taịa na Saidọn bịa ịnụ ihe Jisọs na-ekwu, na ndị bịara ka Jisọs gwọọ ha.
Ọtụtụ mmadụ nꞌime igwe ndị ahụ gbara ya gburugburu gbalịrị imetụ ya ka, nꞌihi na ike dị ukwuu si Jisọs nꞌahụ na-apụ na-eme ka ahụ dị ndị ọrịa nile metụrụ ya aka mma.
“Ma lee ka ahụhụ na-eche ndị ọgaranya siri dị ukwuu! Nꞌihi na ha eketala oke ọṅụ ha nꞌụwa a.
“Ọ bụrụ na mmadụ akụọ gị aka nꞌotu nti, tụgharịara ya nti gị nke ọzọ. Ọ bụrụkwa na onye ọ bụla anara gị uwe ahụ gị, nyekwa ya uwe ime ahụ gị.
“Unu ekpela ndị ọzọ ikpe, ka a ghara ikpe unu ikpe. Amala ndị ozọ ikpe ka a ghara ima unu ikpe. Gbagharanụ ndị ọzọ, a ga-agbagharakwa unu.
Mgbe ahụ Jisọs jiri ilu gwa ha okwu sị, “Onye ìsì enweghị ike idu onye ìsì ibe ya, nihi na ha abụọ ga-adaba nꞌime olulu.
Nwanta akwụkwọ enweghị oge ọ ga-ama ihe karịa onye na-ezi ya ihe, kama mgbe ọ mụsịrị akwụkwọ ya ọ ga-amata ihe dị ka onye ziri ya ihe.
“Gịnị mere i ji legide anya na ntakịrị ahịhịa dị nwanna gị nꞌanya, ma ọ dịghị ihe ọ bụla ị na-eme banyere ibe osisi dachiri gị anya?
Ị̀ ga-esi aṅaa sị nwanna gị, biko kwere ka m tụpụta gị ahịhịa ntakịrị dị gị nꞌanya mgbe ibe osisi dachiri gị nꞌanya adịghị ekwe gị hụ ụzọ? Buru ụzọ wepụta ibe osisi dachiri gị nꞌanya, mgbe ahụ ị ga-ahụ ụzọ nke ọma iwepụ ntakịrị ahịhịa dị nwanna gị nꞌanya.
“Ezi osisi adịghị amị mkpụrụ ọjọọ. Ọ dịkwaghị osisi ọjọọ na-amị mkpụrụ ọma.
Nꞌihi na ọ bụ mkpụrụ osisi mịrị ka e ji ama ụdị osisi ọ bụ. Ndị mmadụ adịghị aghọta oroma nꞌosisi ụdara, otu a kwa o nweghị onye na-aghọta aṅara nꞌahịhịa ogwu.
Achọrọ m igosi unu ihe onye na-abịakwute m nke na-anụ okwu m, ma na-ejikwa ihe ọ na-anụ eme ihe, yiri.
Onye ahụ yiri nwoke wuru ụlọ ya nꞌelu ntọ ala dị mma, onye gwumiri ala, doo ntọ ala ụlọ ahụ nꞌelu nkume. Mmiri ga-ezo, tojuo iyi nile, meekwa ka ide mmiri sọọ gburugburu ụlọ ahụ, ma ọ gaghị eme ka ụlọ ahụ maa jijiji, nꞌihi na e wukwasịrị ya nꞌelu nkume.
“Ma onye ahụ nụrụ okwu m, nke na-ejighị ihe ọ nụrụ mee ihe, dị ka nwoke wukwasịrị ụlọ ya nꞌelu aja, nke na-enweghị ntọ ala ọ bụla. Mgbe ide mmiri sọrọ ụlọ ahụ gburugburu, ụlọ ahụ na-ada nnọọ gbirigidim!”